10000mAh bank amerikan'ny mini miaraka amin'ny Type C input China Manufacturer
Description:Power Bank Kely,Power Bank miaraka amin'ny Flashlight,Power Bank miaraka amin'ny Type C
Home > Products > Power Bank > 10000mAh bank amerikan&#39;ny mini miaraka amin&#39;ny Type C input
Ampahafantaro anao ny banky vaovao amin'ny fahatongavan'ny mini 10000mAh miaraka amin'ny fahaiza-manao feno sy tena misy, habe kely nefa ny habaka lehibe dia mahatonga ny telefaonao foana amin'ny heriny, hazavana LED mazava tsara dia manondro ny fahefana tavela, azonao atao ny mandoa ny telefaona anao mihaino mozika na mijery horonan-tsary , mifanentana amin'ny fampidirana Micro sy Type-C ary double output USB.By manararaotra ny jiro sy ny endri-javatra somary maivana, afaka maka fiaramanidina ianao na mametraka ao am-paosina, manaraka anao na aiza na aiza sy amin'ny fotoana rehetra.Mandeha any amin'ny banky herinaratra mavesatra. ny sela bateria lithium polymer avo lenta dia manao fampisehoana tsara sy fiarovana tsara kokoa.Besides, faingana mafy io 2A tanteraho ny fiantsoana haingana ny telefaona, ary misy loko roa hisafidianana, mainty sy mena, manome anao fifaliana mijery sy mahaliana, karazana vaovao ny famoronana fitaratra dia manamboatra endrika mahavariana kokoa sy mahatalanjona.Welcome hisafidy ny banky fantsom-baovao farany misy asa marobe.
Amin'ny maha-matihanina mpanamboatra ny 7 taona traikefa, isika Hequanqingnuo ny teknolojia manana ny marika ny HQQNUO anjara amin'ny karazana Cell Phone Battery toy ny iPhone Battery, iPhone avo fahaizana bateria, Huawei Battery, Samsung bateria sy ny Cell Phone Accessories toy ny iPhone dovia tranga , Qger charger car, charger telefona finday sns.
OEM / ODM sy ny endri-panamboarana maro kokoa no tohananay.
Anaran'ny vokatra: 2019 elektronika mpanjifa vaovao momba ny fampiroboroboana 10000 mAh finday mora azo
Vokatra: 5V / 2A
Size: 80 * 80 * 23mmm
Color: Mena, Black
Mifanentana amin'ny fidirana Micro sy Type-C roa ary famoahana USB.
Shenzhen Hequanqingnuo Electronic Technology Co., Ltd dia mpanamboatra matihanina amin'ny bateria finday efa ho 7 taona.Izany dia manana tranokala hiasa 1000 metatra toradroa misy mpiasa 100 eo ho eo. Rehefa nanorina azy io tamin'ny 2012, dia manatanteraka fomba hentitra maromaro izahay. avy amin'ireo akora mamatsy ny vokatra.Amin'ny mpamatsy vola sy tompon'andraikitra dia mahazo repety avo amin'ny sehatry ny bateria finday isika.Raha manana tambajotra mivarotra eran-tany izahay mba hahazoana laza tsara.
Izahay dia voarohirohy amin'ny andian-tsolika finday tsy misy fiantrana toy ny batterie, bateria Huawei ary batterie Samsung, raharaha bateria ho an'ny finday, ary ny kojakoja finday toy ny finday sy ny momba ny finday hafa. momba ny fahamendrehana, maharitra amin'ny fifanarahana isika, manome antoka ny kalitaon'ny vokatra ary mandray ny foto-kevitry ny varotra momba ny toetran'ny fitantanana isan-karazany mufti ary tombony kely miaraka amina varotra avo.Products dia nandalo RoHS / CE / FCC taratasy fanamarinana, teknolojia maimaimpoana, afaka miverina. foto-kevitra momba ny 'kalitao voalohany, fitoviana ary tombontsoa miaraka, fampandrosoana miaraka, ary serivisy "tsara indrindra".
Tongasoa eto hitsidika ny orinasa izahay ary miandrandra ny fametrahana ny fandraharahana fandresena win-win.
Power Bank Kely Power Bank miaraka amin'ny Flashlight Power Bank miaraka amin'ny Type C Power Bank Travel Power Bank Ebay Power Bank Battery Power Bank Phone Power Bank Wireless